Dhisida Waxqabadka Sare: Xeerarka Fidinta - Xarunta EcoTechnology
Waa maxay Xeerka Kala Qaadista?
40% dhammaan tamarta laga cuno Mareykanka waxaa lagu cunaa dhismayaasha, gobollo badanna waxay hirgeliyeen xeerar dhisme oo hufnaan tamar si ay isugu dayaan una yareeyaan raadadka kaarboonka deegaanka dhismay. Massachusetts waxay ku sugneyd meesha ugu hooseysa xeerarkan dhismaha tan iyo 2008 markii ay ansixiyeen Xeerka Bulshooyinka Cagaaran, qodob ka mid ah oo looga baahan yahay gobolka inay cusbooneysiiso xeerarka dhismaha sedexdii sanoba mar.
Massachusetts sidoo kale waxay ka gudubtay kana baxsan tahay shuruudahan iskeed isu soo rogtay iyadoo qaadatay "koodh fidsan" oo loogu talagalay magaalooyinka iyo magaalooyinka sanadkii 2009. Sharcigani wuxuu siiyay magaalooyinka iyo magaalooyinka Massachusetts ikhtiyaar inay ku qaataan halbeeg tamarta adag ee guryaha cusub, iyo qaadashada halbeeggan adag ayaa leh suurtagalnimada in la yareeyo qiiqa wasakhaysan ee deegaanka la dhisay sanadaha soo socda.
wuxuu fureyaa feylka IMAGE
In kasta oo qiimaha hore uu waxyar ka sarreeyo, guryaha fidsan ee koodhka fidiya waxay ka badbaadin karaan milkiilayaasha guryaha lacag biilasha tamarta sannadaha soo socda!
Waxaa jira qaabab badan oo lagu cabbiro waxtarka tamarta ee guriga, laakiin mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan ayaa leh qiimeynta HERS (Nidaamka Qiimeynta Tamarta Guriga). Qiimeynta HERS waxaa go'aamiya shaashadda HERS ee shahaadada leh kuwaas oo sahamiya heerarka dahaadhka guryaha, baxsiga hawada, iyo waxtarka qalabka iyo waxyaabo kale. Ka dib waxay u qoondeeyaan guriga qiimeyn waxtarka tamarta inta udhaxeysa 0 iyo 150, dhibcaha hoose ayaa ka sii fiican. Nidaamka sidoo kale waxaa loo qaabeeyey si dhibic kastaa ay ugu dhigantaa boqolley dhibic ah waxtarka tamarta (tusaale ahaan guriga leh 90 dhibcood 10% ayuu ka waxtar badan yahay guriga leh dhibcaha 100).
Mareykanka dhexdiisa sanadka 2020, celceliska dhibcaha guriga caadiga ah ee cusub waa 100, laakiin nidaamka dhismaha salka Massachusetts wuxuu u baahan yahay guryo cusub inay yeeshaan qiimeynta 66 ama ka hooseysafurayaa faylka PDF iyo lambarka fidinta ee Massachusetts wuxuu u baahan yahay qiimeyn ah 55 ama ka hooseysa. Laga bilaabo Ogosto 19, 2020 286 Degmo gobolka ayaa qaatay xeerarka fidinta dhismaha.
Kharashaadka hore ee dhismaha guri fidinaya koodh fidsan ayaa ka sarreeya kuwa guryaha caadiga ah, laakiin kharashaadka ugu horreeya waxay dib ugu laaban doonaan milkiilayaasha guryaha iyada oo loo marayo keydka biilasha korantada sannadihii la soo dhaafay. Mass.gov waxay sii deysaa falanqaynta noodheynta noodhadhka fidinta dhowrkii sanaba mar oo muujisa qiimaha hordhaca ah iyo keydinta muddada-dheer ee raacida xeerarka fidinta. In 2017furayaa faylka PDF , Waxay kormeereen guri 2,550 dhudhun laba jibbaaran ah oo loo dhisay si waafaqsan xeerarka fidinta, waxayna go'aamiyeen in u hoggaansamida koodhka fidinta ay ku kacayso iibsadaha iyo $ 97 dheeraad ah oo ku saabsan bixinta hore iyo $ 77 dheeraad ah oo ah bixinta amaahda guryaha, laakiin waxay badbaadisay guri-iibsadaha $ 213 sanadkiiba Qiimaha tamarta la dhimay, iyaga oo uga tagaya $ 37 dheeraad ah sanadkii ka dib iyo $ 135 sanadkii wixii intaas ka dambeeya.
CET way caawin kartaa!
U hoggaansamida nambarada fidinta waxay noqon kartaa hawl adag, laakiin CET way sahlaysaa! Kooxdayada Waxqabadka Sare waxay qabataa qiimeynta HERS waxayna hagtaa dhismayaasha iyo qandaraaslayaasha iyadoo loo marayo nidaamka u hoggaansamida koodhka fidinta. Waxaan ka caawinaa kuwa wax dhisaya inay qorsheeyaan sida ay filayaan inay ku gaaraan himiladooda HERS qiimeynta oo aan ku hanuuninno inta ay socdaan. Waxaan sidoo kale ka caawinaa rukhsadaha iyo lacag-celinta qalabka iyo nidaamyada tamarta ku shaqeeya.
Kooxda Dhisida Waxqabadka Sare ee CET ayaa kaa caawin kara qorsheynta iyo dhisida gurigaaga cusub ee tamarta tamarta leh!
Waxaan ka caawinnay Ron Lucassen oo deggan Amherst gurigiisa cusub ee u hoggaansamaya koodhkiisa, wuuna ku faraxsan yahay waqtigeenna iyo aqoonta nidaamka. “CET ayaa nagu hagtay nidaamka koodhka fidinta. Waxay hubiyeen inaan helnay dhammaan rukhsadihii aan u baahnayn iyo in wax kasta oo kale ay la jaan qaadayeen qiimeyntayada HERS, ayuu yidhi Lucassen. “CET waxay hubisay in howshu si habsami leh u socoto. Ma jirin wax dib u dhac ah oo runti way ogaayeen waxa ay sameynayeen! ”
Booqo annaga website si aan wax badan uga barto kooxdeena Waxqabadka Sare iyo faa'iidooyinka dhismaha tamarta ku habboon!
Febraayo 3rd, 2022 | 0 Comments